Sida Loo Aqbalo Isticmaalaha Boostada Loo Soo Gudbiyo ee WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Aqbalo Isticmaalaha Boostada Loo Soo Gudbiyo ee WordPress
Sida Loo Aqbalo Isticmaalaha Boostada Loo Soo Gudbiyo ee WordPress
Ganacsade ahaan, waxaad had iyo jeer raadineysaa fursado cusub si aad u ballaariso ganacsigaaga oo aad u abuurto iib. Lahaanshaha istaraatiijiyad wax ku ool ah oo tayo sare leh waa hal dariiqo oo aad ku kordhin karto gaadhistaada.
Habka ugu toosan ee lagu hirgeliyo qorshaha suuq-geynta macluumaadkaaga waa guriga dhexdiisa. Si kastaba ha ahaatee, maaha doorashada kaliya. Waxaad ka heli kartaa dadka inay u soo gudbiyaan macluumaadka goobtaada. Waa istaraatijiyad suuq-geyneed oo guulo badan ay adeegsadeen goobaha sida Business2Community.
In dadka isticmaala ay soo gudbiyaan macluumaadka waa hab fiican oo lagu dhiso bulsho laguna kordhiyo mugga macluumaadka aad soo saarto. Hagahan ayaa ku dhex socon doona sidii aad u wanaajin lahayd boggaga WordPress si aad u aqbasho macluumaadka isticmaaluhu soo gudbiyay.
1. Samee Foomka Gudbinta
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu aqbali karo qoraallada isticmaaluhu soo gudbiyay waa iyada oo loo marayo foomka soo gudbinta. Waxaad si qurux badan u isticmaali kartaa foomamka xidhiidhka WordPress si aad u abuurto foom soo gudbin ah, in kasta oo laba ikhtiyaari ay taagan yihiin.
Taladayada ugu horeysa waa in la isticmaalo WPForms si loo abuuro foomka. Raac tillaabooyinka hoose si aad u abuurto foom addoo isticmaalaya plugin:
Iibso shatiga WPForms Pro (maadaama wax-ku-darka premium loo baahan yahay).
Guji WPForms ka menu oo dooro "ku dar".
Ku rakib wax-ku-darka "Soo Gudbinta Boostada".
Guji "Ku dar Cusub" oo magaca foomkaaga.
Guji qaabka loogu magac daray "Foomka Gudbinta Boostada ee Blog".
Wax ka beddel goobaha boostada blog-ka haddii loo baahdo. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad u ogolaato dadka inay sawirada ku daraan maktabadaada warbaahinta ama martidu ha doortaan qaybta nuxurka.
Guji "Settings" si aad u saxdo muuqaalka foomka. Tusaale ahaan, waad habayn kartaa qoraalka badhanka, ama waxaad awood u yeelan kartaa dejinta AJAX, si aanu boggu dib u soo gelin marka foomka la gudbiyo.
Deji ogeysiisyada foomka gudbinta. Taas macnaheedu waxa weeye waxaad heli doontaa iimayl, tusaale ahaan, marka qofku soo gudbiyo qayb ka mid ah nuxurka.
Kaydi foomkaaga oo koobiyi koodka guntanka ah. Ku dar summada gundhigga bogga aad doorbidayso.
Tijaabi in wax walba ay u shaqeeyaan sidii la rabay.
Nidaamku waa mid toos ah. Waxaad wax badan ka baran kartaa plugin-kan dib u eegista WPForms.
Doorasho kale oo caan ah waa Foomamka Cufis-jiidadka. Haddii aad qorshaynayso inaad isticmaasho foomamka cufis-jiidad, waa inaad iibsataa shatiga sare oo aad gelisaa Ku-darka Hal-abuurka Sare ee Boostada. Shatigan ayaa ku siin doona marin u helka add-ons plugin.
Raac tillaabooyinkan si aad u hesho habaynta foomamka cufisjiidashada goobtaada si aad u aqbasho qoraalada isticmaaluhu soo saaray:
Marka hore iibso shatiga, ka dibna foomamka culeyska culeyska ku soo rar boggaaga WordPress ee Plugins> Ku dar Cusub.
Dooro "Activate Plugin" ee ku yaal boggaaga rakibaadda.
U gudub "Foomamka" oo dhagsii "Form Cusub". Magac u bixi.
Ku dar meelaha khuseeya foomkaaga cusub. Geli cinwaanka, iyo nuxurka jidhka sida kuwani waa lama huraan. Waxa kale oo aad ku dari kartaa sawirro muuqda, tags, qaybo, ama goobo gaar ah.
Si aad u ururiso xogta kore, tixgeli inaad isticmaasho goobaha caadiga ah ama kuwa horumarsan. Kuwani waxay kuu oggolaanayaan xulashooyin dheeraad ah oo habaynta. Tusaale ahaan, waxaad geli kartaa goobta "File Upload" ee sawiradaada la soo bandhigay.
Samee quudin si aad awood ugu siiso foomamkaaga inay u soo diraan xogta la xiriirta ilo kale. Tag Dejinta> Abuuritaanka Kadib> Kudar Cusub. Marka xigta, magac quudintaada.
Marka xigta, buuxi goobta nuxurka Boostada Waxay u ogolaataa Foomamka Cufis-jiidadka inay ku wareejiyaan xogta soo gudbinta boosto cusub. Waa inaad ku dartaa cinwaanka, nuxurka, sawirka sifada, iyo maktabadda warbaahinta.
U oggolow isticmaaleyaasha inay ku daraan summada iyo qaybaha qoraaladooda blog-ka iyagoo ku daraya cashuur-ururinta.
Ugu dambeyntii, ku lifaaq foomka soo gudbinta bog, waadna fiicantahay inaad tagto!
Mar labaad, geeddi-socodku waa mid dareen leh.
Waa inaad dhigataa foomka gudbinta macluumaadka bogga bog si fudud loogu heli karo booqdayaasha goobta. Ka dib oo dhan, waxaad dooneysaa dadka inay helaan foomka oo ay ku soo gudbiyaan nuxurka goobta.
2. Oggolow isticmaalayaasha inay isku diwaan galiyaan WordPress
Beddelka tooska ah ee isticmaalka foom waa in loo oggolaado dadka inay iska diiwaan galiyaan qoraayaal boggaaga WordPress. Waxaad tan ku dejin kartaa adiga oo adeegsanaya is-dhexgalka isticmaalaha maamulka WordPress.
Dashboardka WordPress, taabo Settings, ka dibna dooro Guud. Shaashadan, waxaad ka arki doontaa dashboard-ka soo socda.
Guji sanduuqa calaamadaynta ee ku xiga Xubinnimada si qof kastaa isu diiwaan geliyo goobta. Waxaad u baahan doontaa inaad beddesho doorka isticmaale ee cusub oo aad u beddesho "wax ku biiriyaha".
Keydi isbeddellada adiga oo gujinaya badhanka hoose ee boggaaga. Hadda, dhammaan qofka raba inuu soo gudbiyo nuxurka waa inuu sameeyaa waa inuu galo bogga WP-admin. Laga soo bilaabo bogga, waxay isku qoraan isticmaale ahaan. Dadku waxay awood u yeelan doonaan inay ku soo gudbiyaan macluumaadka iyaga oo isticmaalaya dashboardka Maamulka WordPress.
Muhiim: Habkani waa mid aad u fiican haddii aad rabto inaad haysato shabakad sida Dhexdhexaad, iyo haddii aadan ka welwelin boggaaga SEO.
Si kastaba ha ahaatee shabakadaha intooda badan waxaan u soo jeedinaynaa in la rakibo Tifaftiraha Doorka Isticmaalaha iyo abuurista door isticmaale oo khaas ah si aad u ilaaliso koontaroolka badan ee shabakadaada haddii aad doorato inaad isticmaasho habkan. Tusaale ahaan, waxaad nuqul ka samayn kartaa doorka wax ku darsiga si aad u abuurto mid cusub oo loo yaqaan "Qoraaga"kadibna meesha ka saar gelitaanka awoodaha sida publish_posts, edit_posts, iyo delete_posts maadaama qoraaga martida ahi runtii u baahan yahay oo kaliya inuu abuuro qabyo qoraal ah hal mar oo aad dib u eegi karto.
Sababaha amniga awgood, waa inaad sidoo kale meesha ka saartaa awoodda upload_files (ku-qorayaashu ha ku daraan isku xirka sawirada ay rabaan inay ku daraan), ilaa aad ku rakibto plugin kale si aad u xakameyso nooca faylalka lagu dhejiyo goobtaada. Xakamaynta WP Upload plugin waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka doorato 90+ nooc oo faylal ah, in kasta oo inta badan website-yada kaliya ee awood u siinaya jpg, png iyo suurtagalnimada gif waa inay ku filan yihiin.
3. U isticmaal Goob Dibadeed Maaraynta Mawduuca
Labada doorasho ee hore ee laga wada hadlay ayaa u oggolaaday isticmaaleyaasha inay si toos ah ugu soo gudbiyaan macluumaadka goobtaada. Dabcan, waxa jira door kale oo doorashadan ah. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa qalabka maaraynta mashruuca dhinac saddexaad si aad u maamusho soo gudbinta nuxurka. Inta aad si dhab ah u isticmaali karto ciwaanka iimaylka fudud, agabka maarayntu waxa ay ku caawin karaan adiga iyo ka qaybqaatayaasha in aad is habaysan tihiin.
Tusaalaha wanaagsan ee goobta qaadaya habkan waa Barnaamij-fudud. Waxay u isticmaalaan Trello si ay u maamulaan soo gudbinta nuxurka ka qaybqaatayaasha. Nidaamka ay isticmaalaan waa mid toos ah.
Marka hore waxaad fikrado ka dhiibtaa tifaftiraha goobta. Haddii ay aqbalaan garoonkaaga, waxaa lagugu daraa guddiga Trello. Waxay abuuraan hal kaar qayb kasta oo ka mid ah nuxurka. Waxaad ku soo gudbisaa waxa ku jira Google Doc oo aad kaarka u gudubto heerar kala duwan marka nuxurka la abuuro, maraayo dib u eegis tafatir, oo ugu dambeyntii la daabacay.
Kaararkii waan baneeyay, laakiin waa inaad weli fikrad ka heshaa sida habkani u shaqeeyo.
Ka qaybqaatayaasha goobta waligood si toos ah uma helaan shabakada Barnaamijyada fudud. Weli, waxay haystaan ​​barnaamij aad u wanaagsan oo lagu maareeyo soo gudbinta adeegsaduhu dhaliyo.
Ansixinta fikradda bilawga ah waxay hubisaa in macluumaadka loo gudbiyay goobta uu yahay mid khuseeya oo uu ku dhufto filashooyinka tifaftirka iyo heerarka. Goobo badan ayaa adeegsada istaraatiijiyadan kala duwan si ay u maareeyaan soo gudbinta nuxurka.
Tusaale ahaan, waxaan ogahay dhowr goobood oo ku meelayn doona ka qaybqaatayaasha fikradaha nuxurka halkii ay ka ahaan lahaayeen garoomo. Nidaamkan oo kale wuxuu awood u siinayaa dadka maamulaya goobta inay kordhiyaan mugga nuxurka la soo saaray iyada oo aan la kordhin xajmiga kooxda wax-qorista ee guriga.
4. Samee madal
Haddii aad fiiro gaar ah u lahayd isbeddellada horumarinta shabakadda, waxaad ogaan doontaa in golayaasha ay muddo dheer jireen. Waxay macno samaynaysaa. Madashu waa hab fiican oo lagu dhiso bulsho ku xeeran mareegahaaga.
Waxaa jira plugins kala duwan iyo mawduucyada WordPress oo aad u isticmaali karto abuurista gole. bbPress waa mid ka mid ah xulashooyinka hormuudka ah (xusuus - marka aad rakibayso plugin waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sidoo kale doorato inaad ku rakibto mawduuc diyaar ah bbPress sida Total).
Haddii aad qorshaynayso in aad madal ku yeelato goobtaada, oo aanad doonayn in ay noqoto meesha ugu muhiimsan ee diirada lagu saarayo, waxa aad u baahan doontaa in aad samaysato madasha domain-hoosaad. Tusaale ahaan, waxaad ku martigelin kartaa golahaaga forum.mywebsite.com.
Waxaad u baahan doontaa inaad go'aansato haddii aad rabto in waxa madasha ku jira la tilmaamo. Taas macnaheedu waa waxa ay abuureen isticmaalayaashu waxay ka muuqdaan natiijooyinka raadinta Google.
Si aad u dejiso bbPress goobtaada, samee waxa soo socda:
U gudub qaybta maamulka ee WordPress oo dooro Plugins> Ku dar Cusub. Isticmaal barta raadinta si aad u raadiso bbPress oo dooro.
Tag maamulkaaga WordPress oo dhagsii Forumyada> Kudar Cusub. Marka xigta, u qor cinwaan ku habboon iyo sharraxaad kooban golahaaga. Kadib markaad sidaas sameyso, dooro "Daabac". Markaad rakibto bbPress, waxay si toos ah ugu darsataa Golayaasha, Mowduucyada, iyo xulashooyinka liiska jawaabta ee qaybta maamulka boggaaga WordPress.
Si aad u soo bandhigto golayaashaaga bogga ugu weyn ee boggaga WordPress, samee bog cusub oo WordPress ah. Sii cinwaan ku habboon.
Geli summada gaaban [bbp-forum-index] boggaaga. Guji "Daabac," golahaagu wuxuu ka muuqan doonaa goobtaada. Intaa waxaa dheer, si aad u awood u siiso isticmaalayaasha inay galaan golayaasha goobtaada, geli isku xirka bogga golayaasha ee ku yaal liiskaaga navigation adoo dooranaya Muuqaalka> Menuska.
Ka dhig goobtaada WordPress mid u furan isdiiwaangelin cusub adiga oo gujinaya Settings> General> Qof kastaa wuu isdiiwaangelin karaa. Abuur bogga diiwaangelintaada adoo furaya bog WordPress ah, magacow, ku dara summada gaaban [bbp-register], oo ugu dambeyntii gujinaya daabac.
Samee foomka gelitaanka adigoo gujinaya Muuqaalka> Widgets. Marka xigta, u guuri "Login" widget-ka dhinacaaga.
Waxaad maamuli kartaa goobaha golaha bbPress adiga oo dooranaya Settings> Forums. Waxaa intaa dheer, ogow in bbPress uu sidoo kale la yimaado nidaamka maaraynta doorka isticmaale. Doorarku waa sida soo socota: Keymasters, Moderators, Ka qaybgalayaasha, Daawadeyaasha, iyo La xannibay. In kasta oo laga yaabo inaad weli rabto inaad tixgeliso WP Upload Restriction plugin, kaliya si aad u hubiso in sawirada kaliya lagu dhejiyo golayaashaaga.
Waxaad ka heli doontaa macluumaadka isticmaaluhu soo saaray goobtaada haddii aad leedahay gole. Si kastaba ha ahaatee, ma noqon doonto qaab la mid ah sida boostada blog. Weli, waa hab wax ku ool ah oo lagu korin karo goobtaada.
Fikradaha ugu dambeeya ee Soo-gudbinta Isticmaalaha ee WordPress
WordPress waa goob qiimo leh oo loogu talagalay ganacsiyo aan tiro lahayn oo adduunka oo dhan ah maanta. Maareynta nuxurku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah suuq-geynta ganacsiga adduunka casriga ah. Si kastaba ha ahaatee, helista kooxda ku haboon gudaha guriga waxay qaadataa wakhti badan. Si joogta ah u soo saarta nuxurka tayada leh waxay noqon kartaa mid adag, sidoo kale.
Taasi waa meesha qoraalada isticmaaluhu soo gudbiyo ay ku caawin karaan. Aqbalaadda macluumaadka isticmaaluhu soo gudbiyay iyada oo loo marayo goobtaada waxay awood kuu siinaysaa inaad kordhiso mugga macluumaadka la daabacayo, ka dhisto bulsho ku xeeran goobtaada, oo aad ka hesho wax ku biirin weyn qorayaasha hibada leh.
Hagahan waxa uu kugu dhex maray habab kala duwan oo aad ku aqbashay oo aad u maaraysay waxa isticmaaluhu soo saaray. Haddii aad rabto in isticmaaleyaasha macluumaadka ay soo gudbiyaan si toos ah loogu dhejiyo boggaaga WordPress, tixgeli isticmaalka aalad sida WPForms ama Foomamka Cufis-jiidadka. Labada ikhtiyaarba waxay dadka awood u siinayaan inay soo gudbiyaan macluumaadka adoon siinin inay galaan aagga maamulka ee boggaaga.
Dhanka kale, haddii aad u furan tahay inaad aqbasho soo-jeedinta isticmaalaha dhexda dashboardkaaga, karti geli dejinta xubinnimada. Tani waa mid toos ah.
Ugu dambeyntii, waxaad isticmaali kartaa codsiyada qolo saddexaad ama kaliya ciwaanka iimaylka si aad u maamusho wax ku biirinta. Waxaan ku tusay sida fudud ee Programmers ay tan u sameeyaan iyaga oo isticmaalaya Trello. Waxaad si fudud u isticmaali kartaa qalab kale oo lagu maareeyo mashruuca si aad u gaarto yoolka dhamaadka isku midka ah.
Raac tilmaantan si aad uga faa'iidaysato barta WordPress iyo soo gudbinta isticmaaluhu. Natiijada? I rumayso, goobtaadu weligeed kama dhammaan doonto fikradaha nuxurka weyn, taas oo macnaheedu yahay hoggaan iyo beddelaadyo badan adiga.
Microsoft Edge wuu ka ammaan badan yahay Google Chrome: Warbixinta CyberRatings
Ma Fikir Wanaagsan In La Iibsado Gaadiidka Shabakadda? Ogow Faa'iidooyinka iyo Khasaarooyinka